विदेशमा मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट विषय पढेकाहरुको माग हुन्छ कि हुन्न ?
Sun, Aug 09, 2020 | 23:01:21 NST
Total Hits: 744
राजकुमार भुजेल / रामेछाप, गेलु २
प्रश्न : मैले १५ महिने मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट विषय पढेको छु । अहिले पोलिक्लिनिकमा काम गरिरहेको छु । मेरो पढाइको विषयलाई लिएर म विदेश जान चाहन्छु । विदेशमा मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट विषय पढेकाहरुको माग हुन्छ कि हुन्न ?
उत्तर : बलबहादुर तामाङ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी - खाडी मुलुकमा बिभिन्न हस्पिटलहरुमा दक्ष कामदारहरु जस्तै ल्याब टेक्निसियनको माग भइरहेको हुन्छ । मान्यता प्राप्त मेनपावरहरुले लिने अन्तरवार्ता पास गरेर जान सक्नुहुन्छ । विदेशमा प्रविधिहरु नयाँ हुन सक्छन । यहाँको भन्दा फरक । त्यसैले नेपालीहरुले त्यहाँ ईन्ट्रनसिपमा जादै छु भनेर सोच्दा राम्रो होला । सिप बढाउने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।